Hogaamiyayaasha Iiran ayaa wajahaya baaqyo isa soo taraya oo ku saabsan in ay shaqada laga ceyriyo saraakiil sarsare ka dib markii diyaaradii rakaabka ee Ukrain la soo riday islamarkana ay ku dhinteen 176 qof oo saarnaa. | Hubsad News
Hogaamiyayaasha Iiran ayaa wajahaya baaqyo isa soo taraya oo ku saabsan in ay shaqada laga ceyriyo saraakiil sarsare ka dib markii diyaaradii rakaabka ee Ukrain la soo riday islamarkana ay ku dhinteen 176 qof oo saarnaa.
January 12, 2020 - Written by weryayaasha shabakada hubsad
Kumannaan dibadbaxayaal ah ayaa dalbanaya in isla xisaabtan la helo ka dib markii ay militariga qirteen in si aan ula kac ahayn ay u soo rideen diyaarada rakaab.
Dowladda Iraan ayaa wixii sabtidiika horeeyay dafiraysay in ay masuul ka ahayd burburka diyaaradaasi.
Dibadbaxyada ayaa ka dhacay bannaanka ugu yaraan labo jaamacadood, iyadoo la sheegay in booliiskuna uu adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa.
Iran ayaa shalay qiratay inay “si kama` ah” usoo ridday diyaaradda, saddex maalmood kaddib burburkii diyaaradda oo ay ku dhinteen dhammaan 176 qof oo saarnaa.
Halkey gaarsiisan tahay awoodda militariga Iran?
Yaa ka faa’iideysanaya, yaase ku khasaaraya xiisadda Iiraan iyo Mareykanka?
Maxaa ka jira in Israa’iil iyo Iiraan ay dagaaal u diyaargaroobayaan?
Weerarradaas ayaa waxay Iiraan uga jawaabeysay dilkii Mareykanka uu u geystay Qasem Soleimani oo lafdhabar u ahaa milatariga Iiraan, kaasoo ku dhintay weerar ka dhacay Baghdad 3-dii January.
Ardayda ayaa isugu soo baxay ugu yaraan bannaanka labo jaamacadood, jaamacadaha Sharif iyo Amir Kabir, sida ay wararku sheegayaan, iyadoo markii hore ay ujeeddadu ahayd inay xushmad u muujiyaan dadkii ku dhintay diyaaradda. Dibadbaxyada ayaase is beddelay xalay.
Mr Trudeau ayaa sheegay: “in Canada aysan nasan doonin inaa laga helo isla xisaabtan iyo caddaalad… way murugeysan yihiin, way careysan yihiin wayna tiiraanyeysan yihiin waxayna doonayaan jawaab.”